Hahatsara ny Fitantanana Ao Afrika Ve Ilay Loka Vola Be Indrindra? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 02 Avrily 2015 3:45 GMT
Filoham-pirenena Namibiana teo aloha, Hifikepunye Pohamba. Sary navoaka teo ambanin'ny Creative Commons, avy tamin'i Agência Brasil.
Taorian'ny taona 2011, nila efa ho efatra taona ny “Mo Ibrahim Foundation” vao nahita ny mendrika handray manaraka ny Loka Ibrahim Ho an'ny Fitondràna Tsara Tantana ao Afrika. Tany amin'ny faran'ny taona 2014, nisafidy ny filoha Namibiana Hifikepunye Pohamba ny kaomitin'ny Loka.
Filoham-pirenena Namibiana nanomboka ny taona 2005 i Hifikepunye Pohamba. Tapitra ny 21 Martsa 2014 ny fetram-piasàna faharoa nitondràny.
Ny Loka Ibrahim, izay mankasitraka sy mankalaza ireo filoha Afrikana nampivoatra ny fireneny, nanala ireo vahoaka tao anatin'ny fahantràna, ary nanokatra ny làlana ho any amin'ny firoboroboana maharitra sy tsy mitanila, dia in-efatra monja no nanome loka tao anatin'ny valo taona. Ireo olona nahazo loka teo aloha: Joaquim Chissano ao Mozambika ny taona 2007, Festus Mogae ao Botsoanà ny taona 2008, ary i Pedro Rodrigues Pires ao Cap Vert ny taona 2011, .
Ao anatin'ny folo taona, mahazo 500.000 dolara Amerikàna isan-taona ireo nahazo loka, ary 200.000 isan-taona aorian'io.
Nanazava ny nifidianany ny filoha Pohamba ny “Fondation”:
Fankalazàna ny zava-bita teo amin'ny Fahaiza-mitarika Afrikàna ao anatin'ny taniben'i Afrika ity loka avy aminà Fondation Afrikàna ity.
Nanapaka hevitra ny kaomitin'ny Loka fa hanome ho an'ny filoha Hifikepunye Pohamba ao Namibia ny Loka Ibrahim 2014 Ho an'ny Fitondràna Tsara Tantana aty Afrika .
Nampiaiky ny Kaomitin'ny Loka ny fiompànan'ny filoha Pohamba tamin'ny fanefena firaisankinam-pirenena ary fampihavanana, tao anatin'ny dingana fototry ny fampiroboroboana ny demôkrasia sy ny fampivoarana ara-tsosialy sy ara-toekarena an'i Namibia. Mendrika halain-tahaka ny fahaizany maka ny fitokisan'ireo vahoakany. Nandritry ny folo taona naha-Filoham-pirenena azy, naneho fahaiza-mitarika marina sy hendry izy. Miaraka tamin'izay, nitazona ny fanetren-tenany hatrany tao anatin'ny fotoana nitondràny.
Nanaja fatratra ny fanjakàna tàn-dalàna izy ary ny fanajàna ny Lalàm-panorenana, indrindra tamin'ny resaka fahataperan'ny fotoana fitondràna. Niarahaba ny fanajàny ny mpanohitra ara-politika ihany koa ny Komitin'ny Loka. Nitondra tamin'ny vokany mendrika ihany koa ny fitadiavany manokana ny miralenta eo amin'ny lahy sy ny vavy, ka ny 48 isan-jaton'ireo parlemantera dia vehivavy.
Nizarazara be ihany ireo hevitra momba ny mahamety sy ny fahitsian'ilay loka. Ny taona 2009, nilaza i Ory Okolloh fa tsy hitany hoe ahoana no hahafahan'ilay loka hanatsara ny fitondràna sy ny fitantànana any Afrika :
Tsy azoko hoe ahoana no hanatsaran'ilay loka ny fitondràna sy ny fitantànana ao Afrika – ny olana dia ny ankamaroan'ireo filoha Afrikàna ankehitriny no mpangalatra, mpanao kolikoly, tsy misy ilàna azy mandany fotoana any amin'ny birao mameno ny paosiny izay tena lalina tokoa, izay vola fanampiny ny loka Ibrahim ary tsy mifandray amin'izay ireo olan'ny fandovàna (jereo ohatra ny “Tsy manana nenina aho”Moi), fa mieritreritra aho hoe tia hanana drafitra B ireo filoha nitondra am-polo taonany ireo – aorian'ny fisotroan-drononony,…na dia ny zava-misy aza dia ny ankamaroan'izy ireo no mifidy “fivoahana” mahafinaritra ho an'ny tenany ihany (jereo Mozambika, Ghana) . Saingy, ankoatra ny manome loka ireo filoha Afrikana ireo amin'ny zavatra tokony nataony, sahala amin'ny fifaninanana, nahoana no tsy manangana tahirimbola izay, ohatra hoe, raha te-hanorina trano famakiamboky izy ireo, na hanoratra boky, na hanangana orinasa – tokony hangataka ilay vola izy ireo. Amin'izay izy ireo manana drafitra B, fa tsy hoe mandeha ho azy fotsiny izao.
Tsaratsara kokoa. Ahodino tsy hitodika amin'ny zavatra kely fiantraika amin'ny ho avin'ny fhaiza-mitarka Afrikana ny fifantohan'ny Fondation… Ny tiako ambara dia hoe zavatra afaka azonao, tsy dia mifanaraka amin'ny zava-misy loatra ny tondro sy ny loka, raha tena tia hanova ny fahaiza-mitarika Afrikana tokoa ianao… raha izaho no anontanianao.
Inona àry no tokony ataonao hoy ianao manontany?
Tsy maintsy ataon'ireo fikambanana rehetra izay mihezaka ny hanao asa matotra manodidina ny fahaiza-mitarika aty Afrika ho ivon'ireo zavatra rehetra ataony ny tanora. Kanefa, tsy mbola nijery ny isany sy ny mombamomba ny vahoakan'i Afrika ary nieritreritra tsara ny fidiran'ireo an-tsehatra ianareo. Ampahany fotsiny amin'ny olana ny fandresen-dahatra ireoi Mugabe-n'izao tontolo izao hametra-pialàna – tokony hanontany tena ianareo hoe iza no hisolo ilay mpiambina teo aloha? Misy fanomànana mpisolo ve? Samihafa aminy ve ireo hisolo azy? Sa hoe tanora kokoa fotsiny izy ireo, noana kokoa, mitovy amin'ny teo aloha ihany saingy mazan-doha kokoa (jereo ny parlemantan'i Kenya ankehitriny).
Hitako fa manome vatsim-pianarana hanondrotana ireo mpitarika anareo, efa fanombohana tsara izany. Fa raha hanondrotra ireo mpitarika eo an-toerana ny tiana hahatongavana, tiako ireo vatsim-pianarana raha omena ireo mpianatra mba hahafahany manohy tsara ireo fampianarana eo an-toerana.
Sady tena ao anatin'ny foto-dresaka mihitsy ny vatsim-pianarana.
Ary ahoana raha hoe asiana tahirimbola ho an'ireo tanora Afrikana izay mitady toerana – mila tonga miaraka aminà vinavinan'asa izy ireo, manao sonia hanaja ny fitondràna tsara tantana, ary mianiana ny hisokatra amin'ny fampielezan-keviny ary raha voafidy izy ireo dia hanaja ilay antontan-kevitra nandaniana azy ao amin'ny Parlemanta, ireo fanambaràna ampahibemaso sy ny sisa….ohatra ny hoe adaladala ve? Angamba. Fa raha oharina amin'ilay tondro momba ny demôkrasia…hhhm.
Na raha hoe lasa resaka politika be loatra izany – mety koa hoe tahirimbola ho an'ny dia/vatsim-pianarana ho an'ireo tanora Afrikana mba handehandeha anatin'i Afrika ary mandany iray volana na 6 volana na iray taona – mipetraka any amin'ny firenena hafa, manao asa iombonana, manoratra boky, maka sary… mety daholo izay afaka atao – ny hevitra ao ambadik'izay dia ny hoe afaka manana fahafahana ny hahafantatra ny tanibeny izy ireo, hanitatra ny fomba fijeriny ny tany amin'ny fomba hafa, hametraka tambajotra amin'ireo namany Afrikana, ary hanomboka hanorina fifandraisana mihoatra ny sisintanin'ny firenena iray, izay tena ilaina tokoa ho an'ny ho avin'ny tanibe (mieritreritra varotra, fanamoràna ny dia, sy ny sisa.).
Raha niresadresaka ilay safidin'ny Fondation ny taona 2014, hoy i Robert I. Rotberg, namana ao amin'ny “Woodrow Wilson International Center”, nanontany hoe “Tsara safidy ve ny Fondation Ibrahim?” Nanamarika izy fa ny ankamaroan'ireo zava-bita notanisain'ny kaomitin'ny loka dia tsy zavatra nataony fa nataon'ny teo alohany, ny filoha voalohan'i Namibia, Sam Nujoma:
Azo iadian-kevitra indray ny nanitarany azy, izay azon'i Pohamba lazaina ho nataony nahatonga ireo vokany tena tsara ireo. Filoha tena tsy namiratra mihitsy izy ho an'ny fireneny, ary ny ankamaroan'ny fivoarana sy ny fomba fandaharana ary ireo nolazain'ny kaomitin'ny loka dia i Nujoma daholo no nanao azy, na vokatry ny asa tànan'ny olona hafa tena nahomby tao anatin'ny antoko SWAPO teo amin'ny fitondràna. Natao foana ny fivoaran'ny zon'olombelona na teo aza ny fanoherana ofisialy. Tanteraka ihany koa ny fahazoana media malalaka, noho ireo ezaka tsy ankiato nataon'ireo teo an-toerana, fa tsy avy amin'ny governemanta tsy nanao inona na inona mihitsy akory. Tsy nisy olona tao Namibia nieritreritra hoe hankany amin'ny olona to an'i Pohamba, izay voafetra ihany ny zava-bitany ary tsy dia nisongadina firy, ny lokan'ny fahaiza-mitarika .
Ny tokony ho izy, raha nisy zavatra, tokony hoe noarahabaina noho ny zavatra tsy nofidiany tsy hatao i Pohamba fa tsy tamin'ny zavatra nataony. Miova ankehitriny ny SWAPO, ho antoko politika manana safidy malalaka, voalohany any atsimon'i Afrika, amin'ny ampahany dia noho ny tsy faneken'i Pohamba hanohitra ny fiovàna. Niatrika fiovàna anatiny nilamina ny SWAPO, tao anatin'ny taona 2014, mifanohitra amin'ny Kaongresy Nasionaly Afrikana (ANC) any Afrika Atsimo, na ny “Zimbabwe African National Union” – ny “Patriotic Front” any Zimbaboe. Tsy tsara antoka ho an'ny Ovambo, ilay vondrona foko mibahan-toerana, intsony ireo toerana ambony. Ny zanaka lahin'i Nujoma, mety ho mpandimby an'i Pohamba, dia voahilika ho eny amin'ny sisiny. Ny zava-nisy, tamin'ireo kongresy roa nifanesy nataon'ny antoko dia nanapa-kevitra ny SWAPO ny ho tarihan'ny vetsovetsom-po sy ny safidin'ireo mpikambana, fa tsy ny an'ny filoha niala teo amin'ny toerany.
Noho izany, Hage Geingob, 74. no hiandraikitra ny fitondràna an'i Namibia, ny 21 Martsa, taorian'ny naha praiminisitra azy ary nataon'i Nujoma sesintany tao anatin'ny fotoana fohy. Damara i Geingob, iray amin'ireo foko kely indrindra any Namibia, ary nahazo ny “British Ph. D.” ny taona 2004 tamin'ny fanohanana voka-pikarohana momba ny fomba hampiroboroboana ny fitondràna tsara tantana any Namibia. Iray tamin'ireo namorona ny “African Leadership Council” (Filankevitry ny Fahaiza-mitarika Afrikana) ny taona 2004.
Manana fomba fijery hafa ny profesora Calestous Juma, Filohan'ny Fampianarana ambony ao anatin'ilay “Mason Fellows Program” an'ny “Harvard Kennedy School”. Nilaza izy fa mila loka bebe kokoa ho an'ny fitantànana tsara i Afrika, fa tsy kely noho izao:
Niompana kokoa tamin'ny hoe tena ilaina tokoa ve ny nankasitraka ireo filoha tamin'ny vola mety tsy ho ilainy akory ny ampahany betsaka tamin'ny adihevitra. Ny hafa nanontany ireo mason-tsivana nampiasaina mba hisafidiana ireo mpandresy ary nilaza fa tokony resaka nasiônaly ny fitsaràna ny zava-bita amin'ny resaka fahaiza-mitarika.
Raha toa ka marina ireo hevitra naroso tao anaty fanohanana voka-pikarohana, adinon'izy ireo ny tena anjara toeran'ilay loka ao anatin'ny fandalinana fampitahàna ny tsara indrindra. Ny haben'ilay loka dia entina milaza ny fankasitrahana apetraka ho an'ny fitantanana tsara. Raha betsaka tokoa ny fitantanana tsara tao Afrika, mety tsy nilaina akory ny loka tahaka izao.
Ilay loka sy ny fifantohan'ny media aterak'io dia manome aingam-panahy ho an'ireo mpitarika sy ireo mpanaraka azy hieritreritra ny lanjan'ny tonga lafatra any amin'ny asam-panjakàna. Mahatonga ireo mpitarika hisaina momba ny fandraisany anjara, izay tsy miankina amin'ny hoe hahazo ilay loka ve izy ireo sa tsia, ny fisian'ilay fampitahàna ny fitantanana.
Tsy tahàka ireo loka hafa miankina amin'ny zavatra andrasan'ny vahoaka aminy, ilay fanapahan-kevitra dia nifototra tamin'ny ezaka fikarohana nomanina, izay mampiasa maridrefy maro mba hanolorana ireo mpifaninana amin'ny kaomity mpifidy. Afaka tsy miombon-kevitra amin'ilay maridrefy ianao, fa tsy afaka mangataka ny hanaovana fikarohana bebe kokoa kosa .
Marina fa misy ireo firenena sarotra entina kokoa noho ireo hafa. Tsy antony hametrahana fanontaniana momba ny mahamety na tsia ny safidy tamin'ilay loka anefa izany. Antony tokony hanomezana loka bebe kokoa aza izany, fa tsy kely kokoa. Maro ireo mpandraharaha Afrikana hafa izay afaka manampy manitatra ny fototra hitsaràna ny fahatsaràna any amin'ny asam-panjakàna, amin'ny fanohanana fanomezana loka hafa.
Tao anaty bitsika izay nahatonga adihevitra tao amin'ny Twitter teo amin'izy roalahy, tsy nitovy hevitra tamin'i Calestous Juma, ny Profesora Makau Mutua, izay Profesora tsongoim-bolo amin'ny resaka Lalàna ao amin'ny Anjerimanontolom-Panjakàna ao New York:
Eny, fa tokony kelikely kokoa ny tetibolan'ilay loka ho an'ireo filoham-pirenena izay efa manan-karena. Tokony homena ireo tena mila izany ny betsabetsaka kokoa.
Afaka misafidy ny hanome ho an'izay tiany ireo mpandresy @MarthaKarua
Tsia. Tsy tokony nomena azy ireo akory io. Loka lehibe sahala amin'ny hoe tsolotra entina hatrehana ny kolikoly.
Misy ireo karazana loka maro atolotra noho ny antony samihafa. Karazany iray ihany io. Izay no fijeriko azy. @MarthaKarua
Tsy misy loka “maro” mitovy habe amin'io, ary tsy avy amin'ny Afrikana, na ny hafa. Tena fanovàna lehibe io.
Ny Loka Ibrahim no lehibe indrindra ho an'ny olon-tokana eto an-tany.
Amin'ny kolontsainan'ny fanambatambazana olona, fanomezana no ijerena ireo loka fa tsy fandrisihana. Izany no antony tsy ahazoan'ny olona ny dikan'ny #MIFPrize @MarthaKarua
Niady hevitra fohy momba ny fahamendrehana hahazoana ilay loka ireo mpampiasa TWitter roa hafa:
mety tsy fantatrao angamba ny dikan'io loka io? Vao haingana, tao anatin'ireo mpitondra Afrikana mpanao kolikoly, nahita iray mendrika azy io izy ireo.
Manahoana i Peter, fantatro tsara ilay loka. Fantatrao ve fa tamin'ny taona lasa, nahazo fifanarahana hanao ny tranon'ny governemanta ny orinasan'ny zavakavavin'i #Pohamba.
ilay raharaha nanala baràka , nahatafiditra ny zanakavavin'i Pohamba, izay nahazoan'ny orinasany ny fifanarahana fanamboarana trano mitentina an-tapitrisany maro no lazain'i Danile Finnan.
Nanipika tao anatin'izany i Calestous Juma, hoe nahoana no mampisy otri-po be ireo loka ho an'ny fahatsaràna toy ity iray ity:
Mampisy otri-po be ny loka ho an'ny fahatsaràna rehefa mandrahona ny fifanohanana, ny fanambatambazana olona ary ny tsy fahalavorariana @Mo_IbrahimFdn #MIFPrize